travelitaly Archives | စာမျက်နှာ2၏3| တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: travelitaly
နေအိမ် > travelitaly
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ သင်၏နောက်အားလပ်ရက်အပေါ်အချို့သောထိပ်တန်းဗိသုကာကြည့်ဖို့ရှာဖွေနေ? ဒါကြောင့်ပါလျှင်, ဖြစ်ကောင်းသင်တို့အဘို့ဥရောပထက်မပိုကောင်းသောအရပ်ဌာနလည်းမရှိ. သငျသညျဂန္ထဝင်ဗိသုကာစတိုင်များကိုစိတ်ဝင်စားနေဒါမှမဟုတ်တချို့ပြောင်-လူသိများရတနာကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ခြင်းရှိမရှိ, သငျသညျဥရောပမြို့ကြီးများဖုံးလွှမ်းခဲ့ကြ. ကြည့်ကြပါစို့…
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဒါဟာဥရောပအရည်အသွေးကိုဒိန်ခဲများအတွက်အကောင်းဆုံး destination သည်ကြောင်းကိုအလွန်လူသိများတဲ့တကယ်တော့င်. ထိုအခါဒိန်ခဲကိုနှစ်သက်အဖြစ်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းဥရောပပူဇော်ရန်နှင့်တွေ့ဖို့ဘယ်လိုရှိတယ်ကိုအကောင်းဆုံးဒိန်ခဲဖြစ်သည့်သိလို. Join us as we run through the…
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ အကောင်းဆုံးဥရောပစားသောက်ဆိုင် Michelin လမ်းညွှန်ဥရောပတစ်ဝှမ်းရထားခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ရန်အကြီးအက start ကမ်းလှမ်း. အဆိုပါ Michelin လမ်းညွှန်ယခုဥရောပခရီးသွားများအတွက်စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဟိုတယ်များတစ်ရွေးချယ်ရေးကမ်းလှမ်း 38 ဥရောပမြို့ကြီးများ. အသစ်သုံးမျိုးမြို့ကြီးများဤဆက်ပြောသည်ပြီ 2019 ထုတ်ဝေ: Zagreb…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ တိုင်းစစ်မှန်တဲ့စပျစ်ရည်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဥရောပ၌စပျစ်ရည်ကိုမြို့ကြီးများတတ်နိုင်နှင့်အံ့သြဖွယ်သောစပျစ်ရည်ကိုပူဇော်သိတယ်. ပြင်သစ်ကနေအီတလီ, နောက်ထပ်, အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဝိုင်ရှိသည်ဖို့အများကြီးအားဖြင့်ဖော်ထုတ်နေကြ. စိတျအပိုငျးမှာတော့, ဤသည်စံပြရာသီဥတုကြီးထွားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်…